ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုကုသ - ဆောင်းပါးများ - 2019
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်များ၏ဖယ်ရှားရေးထွက်သယ်ဆောင်ရန်မည်သို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုကုသ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ။ အဖြစ်ကောင်းစွာဗိုင်းရပ်စ်ဆန့်ကျင် flash drive ကိုကုသမှုအဖြစ်, malware နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့ဆက်စပ်သောအခြားအလက်စွဲဖယ်ရှားပစ်ရန် antivirus ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုပါ။
အကောင်းဆုံးက Windows 10 Antivirus ကို (အခမဲ့နှင့် paid နှစ်ဦးစလုံး)
အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Antivirus ကို
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ malware ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
browser ကို Pop-up အတွက်ကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားလုပ်နည်း
သူ့ဟာသူကြော်ငြာတွေနှင့်အတူ browser ကိုဖွင့်လှစ်ပါလျှင်အဘယျသို့
built-in utility ကို Google Chrome ကို malware ကို delete
အန္တရာယ်ရှိတဲ့နှင့်အလားအလာမလိုချင်တဲ့အစီအစဉ်များကိုရှာဖွေပြီးဖယ်ရှားပစ်ရန် RogueKiller အသုံးပြုခြင်း
တစ်ဦး stand-alone Windows Defender 10 (Windows Defender ကိုအော့ဖ်လိုင်း) ကိုသုံးလုပ်နည်း
smartinf.ru ဖယ်ရှား funday24.ru လုပ်နည်း
ဗိုင်းရပ်စ်အွန်လိုင်း Kaspersky VirusDesk များအတွက်ဖိုင်တွေစစ်ဆေးလုပ်နည်း
အကောင်းဆုံး Antivirus ကို 2015
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် Antivirus ကို 360 စုစုပေါင်းလုံခြုံရေး - အမျိုးမျိုးသောလွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုအပေါ်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ antivirus ကို။
သင့်ရဲ့ဖိုင်များကို encrypt လုပ်ထားတဲ့ပြီ - ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ဖိုင်များကို decrypt ဖို့ဘယ်လို
အကောင်းဆုံး antivirus ဆော့ဖ်ဝဲ 2014 (အခမဲ့နှင့် paid)
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ Pirrit SUGGESTOR ဖယ်ရှားပစ်ရန်နှင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ Pop-up ကြော်ငြာတွေဖယ်ရှားပစ်ရဘယ်လို
အကောင်းဆုံး Antivirus ကို 2013 ခုနှစ်
အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Antivirus ကို 2013 ခုနှစ်
အဘယ်အရာကိုဗိုင်းရပ်စ်လျှင် (အရင်ကဆိုရင်များအတွက်) သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လုပ်ဖို့
ဗိုင်းရပ်စ်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကပ် - malware များမှအကို USB storage device ကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းအနည်းငယ်
ဒါကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်များထိမှန်ပါကအဆိုပါ hosts file ကို fix လုပ်နည်း
အန်းဒရွိုက်, Mac OS X မှာ, Linux နှင့် iOS ပေါ်မှာရှိ viruses ဖြစ်ပါသလား
အခမဲ့ scan ကဖိုင်တစ်ဖိုင်သို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်များအတွက် site တစ်ခုအွန်လိုင်း VirusTotal အဖြစ်
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုဖယ်ရှားပြီးနောက် Windows တွင် desktop ပေါ်မှာ boot မထားဘူး
လုံးဝကိုကွန်ပျူတာထဲကနေ Avast Antivirus ကို uninstall လုပ်ဖို့ဘယ်လို
Kaspersky Anti-Virus ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
ESET NOD32 Antivirus နှင့်စမတ်လုံခြုံရေးဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
ငါက Android ပေါ်မှာ Anti-virus ကိုလိုအပ်ပါသလား?
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် antivirus ကိုဘစ်ဒဖန်ဒါ Internet Security 2014
Windows ကိုပိတ်ဆို့ - ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ
သငျသညျအဆက်အသွယ်ထဲသို့မဝငျနိုငျလြှငျဘာလုပ်ရမှန်းအပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက် - ငါဆိုက် Vkontakte သို့မသွားနိုင်
သင်၏ desktop ကနေနဖူးစည်းစာတန်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - code ကိုသော့ဖွင့်ဖို့န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. အကြိမ်ကြိမ် registry ကို အသုံးပြု. သင်၏ desktop ကနေ SMS ကိုနဖူးစည်းစာတန်းဖယ်ရှားပစ်ရန်နည်းလမ်းများ, Boot တက် LiveCD disc ကို။ Windows ကို boot မှပေါ်လာသောနဖူးစည်းစာတန်းဖျက်ခြင်း
browser ကိုတစ်ဦးနဖူးစည်းစာတန်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - ကွန်ရက်စာမျက်နှာမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားကြောင်းသတင်းပို့အားလုံးစာမကျြနှာမြားနှငျ့က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်သောနဖူးစည်းစာတန်းကိုဖယ်ရှား, သင်အော်ပရာသို့မဟုတ်ပဲနှောင့်အယှက်ကြော်ငြာတွေဖေါ်ပြခြင်း update လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
HitmanPro Kickstarter အသုံးပြု. သင်၏ desktop ကနေနဖူးစည်းစာတန်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
အစား desktop ပေါ်မှာ၏, နဖူးစည်းစာတန်းကွန်ပျူတာကိုသော့ခတ်ထားပျောက်ကင်းအောင်ကုသခဲ့ပြီးမှ, သင်ကအလွတ်မျက်နှာပြင်ကိုမြင်ရလျှင်အဘယ်သို့ပြုရမည်အပေါ်ညွှန်ကြားချက်များ - တစ်ဦးနဖူးစည်းစာတမ်း၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်မှာ Windows startup recover လုပ်နည်း
အစား flash drive ကိုအပေါ်ဖိုလ်ဒါသို့မဟုတ်ဖြုတ် hard drive ကို၏အသုံးပြုသူ shortcuts တွေကိုမြင်ပြီးဖိုလ်ဒါကိုလည်းဝှက်ထားလျက်ရှိသောနှင့်စနစ်က attribute တွေဖယ်ရှားမရနိုငျသောရလဒ်အဖြစ်တစ်ဘုံဗိုင်းရပ်စ်ပိုး - က flash drive ကိုပေါ်မှာရှိသမျှဖိုလ်ဒါတံဆိပ်ဖြစ်လာသည်
အင်တာနက်နှင့် Skype ကိုအလုပ်, ဒါပေမယ့်စာမကျြနှာသာက Internet Explorer အတွက်ပွင့်လင်းသို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ်မ - စာမကျြနှာဟာအချိန်ကုန်သကဲ့သို့, ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်လှစ်မထားဘူးသည့်အခါမကြာခဏပြဿနာ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အင်တာနက်ကိုကျင့်သောအကျင့်, Skype နဲ့ ICQ ချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြသည်။
အခမဲ့ Antivirus ကို - အခမဲ့ antivirus ကို၎င်းတို့၏အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ အသုံးပြုမှု၏ထိရောက်မှုနှင့်သင့်လျော်သော။ အခမဲ့ antivirus ဆော့ဖ်ဝဲကို download လုပ်ပါမှ links ။
browser ကိုမှတဆင့် malware များပြန့်နှံ့ဖို့အဓိကနည်းလမ်း၏ဖော်ပြချက်, Trojan, ဗိုင်းရပ်စ် - အင်တာနက်ပေါ်ရှိဗိုင်းရပ်စ်ဖမ်းရန်ကဘယ်လို။
Webalta ကဲ့သို့သောအရာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့နှင့်လိုအပ်သော browser ကိုစတင်စာမျက်နှာသို့ပြန်လာရရန်မည်သို့အပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက် - ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ Webalta ရဖို့ဘယ်လို။
ကွန်ပျူတာကနေ Mobogenie ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - ကြောင်း Mobogenie အစီအစဉ်နှင့်မည်ကဲ့သို့လုံးဝကဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ပြွန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့စာမျက်နှာ start - ကွဲပြားခြားနားသော browser များအတွက်ပြွန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်။